ဂရိ - အများပိုင်သတင်းများ - အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B2B Marketplace သတင်း
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 27, 2021 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 27, 2021 Doris Mkwaya	မှတ်ချက် Leave
သတင်းအရင်းအမြစ်များအရဥရောပဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဝင်နှင့်ဂရိဗဟိုဘဏ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Yannis Stournaras မှပြောကြားခဲ့သည်မှာ ဥရောပဗဟိုဘဏ်သည်ချေးငွေကုန်ကျစရိတ်မြင့်တက်လာမှုနှင့်အတူကြွေးမြီဝယ်ယူမှုကိုတိုးမြှင့်သင့်သည်.
အမှတ်ရစရာခရီးအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အကောင်းဆုံး Cruise 6
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဖေဖေါ်ဝါရီလ 21, 2021 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 20, 2021 Nina Simons	မှတ်ချက် Leave
သငျသညျရေရွက်လွှင့်ခြင်းနှင့်အသစ်သော cruise စွန့်စားမှုအတွက်လုပ်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါသလား အပျော်စီးသင်္ဘောဖြင့်ကမ္ဘာကိုလေ့လာခြင်းသည်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်တိုင်းပြည်ကိုသိရန်နှင့်သွားလာရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အဆောက်အအုံများနှင့်ပြည်သူများ၏ပြည့်စုံသောမြင်ကွင်းကိုမြင်တွေ့ရစဉ်သင်၏မျက်နှာ၌လေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်အတူသင်ကုန်းပတ်ပေါ်တွင်ထိုင်။ အဆင်ပြေပါသည်။
ပိုကောင်းသည့် ၀ န်ဆောင်မှုကိုမည်သည့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကသင့်အားပေးသနည်း။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇန်နဝါရီလ 1, 2021 ဒီဇင်ဘာလတွင် 31, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
Google သည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အသစ်တစ်ခုနှင့်ထွက်ပေါ်လာသောအခါ၎င်းသည်သင်ထည့်သွင်းလိုက်သောစံနှုန်းများအပေါ် အခြေခံ၍ ရှာဖွေခြင်းသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ဤကုမ္ပဏီသစ်သည်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ ဂူဂဲလ်မတိုင်မီအင်တာနက်ပေါ်မှထုတ်ကုန်အများစုကိုစာရင်းပြုစုပြီးသွယ်ဝိုက်။ ဝယ်ယူခဲ့သည် ဟုတ်ကဲ့ directory များ။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ဟုခေါ်သည့် Yahoo (ဥပမာအားဖြင့်နေရာအနှံ့အပြားတွင်ရှိသည်) သည်ရိုးရှင်းသောစာရင်းလမ်းညွှန်များဖြစ်သည်။
Erdogan သည် Turk Block အသစ်ကိုစဉ်းစားသည်
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဒီဇင်ဘာလတွင် 27, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 27, 2020 Christina Kitova	မှတ်ချက် Leave
တူရကီသမ္မတ Recep Tayyip Erdogan သည် "တူရကီ" စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအရပိတ်ပင်တားဆီးမှုကိုဖန်တီးရန်စဉ်းစားနေသည်။ Nagorno Karabakh ပconflictိပက္ခကို ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ပြီးနောက်အဇာဘိုင်ဂျန်နိုင်ငံအတွက်အကျိုးရှိစေမည့်မဟာဗျူဟာဆုံးဖြတ်ချက်အားချမှတ်နိုင်ခဲ့သည်။
The Globe သည်နှစ်သစ်ကူးအတွက်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကုန်ပစ္စည်းအသစ်များကိုကမ်းလှမ်းသည်
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဒီဇင်ဘာလတွင် 27, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 24, 2020 လက်ကားနှင့် B2B သုံးသပ်ချက်များ	မှတ်ချက် Leave
Global Value Chain နှင့်ချိတ်ဆက်ခြင်း - ပိုမိုထိရောက်သောအရောင်းအ ၀ ယ်တည်ဆောက်ပုံ
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဒီဇင်ဘာလတွင် 23, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 22, 2020 လက်ကားနှင့် B2B သုံးသပ်ချက်များ	1 မှတ်ချက်
ရောင်းဝယ်ရေးကိရိယာတစ်ခုအနေဖြင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတန်ဖိုးကွင်းဆက်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အသစ်အဆန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ စာရင်းသည်သင့်အားပြိုင်ဘက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများထက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်အားသာချက်များကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန်၊ ကုမ္ပဏီ၏အမြတ်အစွန်းတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ဖောက်သည်အသစ်များကိုဆွဲဆောင်ခြင်းတို့အားကူညီနိုင်သည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေးသည်မှတ် 54% မှ 60% ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရောင်းအား၏။ ဒါကြောင့်သင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရောင်းအားမှအကျိုးခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်အမည်ဖြင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ထုတ်ကုန်များကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်စျေး ၀ ယ်ပါ
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဒီဇင်ဘာလတွင် 20, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 17, 2020 လက်ကားနှင့် B2B သုံးသပ်ချက်များ	မှတ်ချက် Leave
At ကမ္ဘာလုံးဆိုင်, သင်၏စတိုးဆိုင်များကို ၀ ယ်လိုအားမြင့်မားသောစျေးနှုန်းများဖြင့်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်သိုလှောင်ထားနိုင်ရန်လက်ကားရောင်းသူများရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများကိုကျွန်ုပ်တို့နားလည်ပါသည်။ ဒါဇင်ပေါင်းများစွာသောရောင်းချသူများသည်ကမ္ဘာအ ၀ ှမ်းမှကုန်ပစ္စည်းများကို၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုရောင်းချနေသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ၊ အွန်လိုင်းလက်ကားအရောင်းအဝယ်အသစ်နှင့်လက်မှတ်ထိုးထားပြီးဖြစ်သည်။
သင်၏စီးပွားရေးကို Global Value Chain ကိုကူညီရန်နည်းလမ်းသုံးခု
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဒီဇင်ဘာလတွင် 17, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 16, 2020 လက်ကားနှင့် B2B သုံးသပ်ချက်များ	မှတ်ချက် Leave
ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေး 54% မှ 60% ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရောင်းအား၏။ သင်၏ကုမ္ပဏီ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုတိုးမြှင့်ရေးအတွက်ပထမ ဦး ဆုံးသော့ချက်ခြေလှမ်းများကိုရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးလိုပါသည်။
သင်၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုတိုးတက်အောင် ဦး တည်သောပထမခြေလှမ်းမှာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဓိကရင်းမြစ်များနှင့်ထောက်ပံ့သူများရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်လက်ရှိအခြေအနေတွင်ရှိသောတရုတ်အပေါ်မှီခိုအားထားမှုကိုလျှော့ချနေကြောင်းထင်ရှားနေသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏ 28%။ ဒါကတရုတ်နဲ့ဝေးကွာနေတဲ့မယုံနိုင်စရာအခွင့်အလမ်းအသစ်တွေဖန်တီးပေးလိုက်တာပဲ။
ယခုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်စျေး ၀ ယ်ပါ။ လက်ကားကုန်အမှတ်တံဆိပ်များကိုစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ရောင်းချသည်
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဒီဇင်ဘာလတွင် 11, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 12, 2020 လက်ကားနှင့် B2B သုံးသပ်ချက်များ	မှတ်ချက် Leave
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှရောင်းချသူဒါဇင်ပေါင်းများစွာတို့သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလက်ကားရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်တွင်စတိုးအသွင်အပြင်များဖန်တီးရန်အဆောတလျင်ကြိုးစားနေကြသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်။ သူတို့ကနေထုတ်ကုန်ရောင်း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု, ဂါနာ, ၾသစေတးလ်, ဟောင်ကောင် နှင့်အနည်းငယ်အမည်ကိုမှပြင်သစ်။
ယခုအခါရာနှင့်ချီသောအမေရိကန်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်ကုန်ပစ္စည်းများသည်သင့်ကိုအံ့အားသင့်စေမည့်စျေးနှုန်းများဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဝယ်သူများကဲ့သို့သောအမှတ်တံဆိပ်အမည်များကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည် ၅ နာရီစွမ်းအင်၊ Baby Ruth, Advil, Chips Ahoy နှင့် Claritin အနည်းငယ်အမည်ကိုဖို့။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဒီဇင်ဘာလတွင် 9, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 16, 2020 လက်ကားနှင့် B2B သုံးသပ်ချက်များ	မှတ်ချက် Leave
Global Value Chain (သို့) တစ်ခါတစ်ရံ Global Supply Chain (GVCs) ဟုရည်ညွှန်းသည်မှာကမ္ဘာပေါ်တွင်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကြီးထွားမှု၊ အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးမှုနှင့်တိုင်းပြည်နှင့်ကုမ္ပဏီနှစ်ခုလုံးအတွက်လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားမှုတို့အတွက်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးမောင်းနှင်အားဖြစ်နိုင်သည်။
GVC များသည်နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်သိသိသာသာပါ ၀ င်သည်။ Value-added ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုသည်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများ၏ဂျီဒီပီကို ၃၀% ခန့်ကူညီသည်။
Global Value Chain သည်ကုန်ပစ္စည်းများကိုရောင်းချရန်နှင့်စျေးနှုန်းချိုသာသောဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးတွင်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းကိုသက်သေပြခဲ့သည်။
GVC မောင်းနှင်သောဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်အတူအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှနိုင်ငံများအနေဖြင့်ပိုမိုမြင့်မားသောတန်ဖိုးမြှင့်လုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်သူတို့၏စီးပွားရေးကဏ္ aspects အားလုံးတွင်သူတို့၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြိုင်ဘက်များကိုခုန်ကျော်လွှားနိုင်ရန်ကူညီခြင်းဖြင့်နည်းပညာနှင့်ဗဟုသုတပိုမိုထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်ကြီးထွားမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဒီဇင်ဘာလတွင် 6, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 16, 2020 လက်ကားနှင့် B2B သုံးသပ်ချက်များ	မှတ်ချက် Leave
ပြီးခဲ့သည့်လကကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အစီရင်ခံခဲ့သောစစ်တမ်းတစ်ခုအရအသေးစားနှင့်အလတ်စားကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ် ၇၀၀ နီးပါးသည်လက်ကားအနာဂတ်၏အကြောင်းကိုသူတို့၏အတွေးများကိုပေးခဲ့သည်။ စစ်တမ်းကောက်ယူချက်အရစစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့သောအမှတ်တံဆိပ်အမှုဆောင်အရာရှိ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းသည်လက်ကားရောင်းဝယ်မှု၏အနာဂတ်အပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအလားအလာမရှိကြောင်းနှင့် 700% သည်သူတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏လက်ကားဘက်၌ဆက်လက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်စီစဉ်ထားသည်။
ထုတ်လုပ်သူများအတွက်အရိုးရှင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာကမ္ဘာအနှံ့တွင်အွန်လိုင်း ၀ ယ်ရန်နှင့်ရောင်းချရန်ဖြစ်သည်
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဒီဇင်ဘာလတွင် 2, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 16, 2020 လက်ကားနှင့် B2B သုံးသပ်ချက်များ	မှတ်ချက် Leave
ထုတ်လုပ်သူများနှင့်အွန်လိုင်းအီးကောမတ်စ်အတွက်ကမ္ဘာ့စျေးကွက်ကပြောင်းလဲနေပြီ။ ယနေ့ထုတ်လုပ်သောကုန်ပစ္စည်းများ ၀ ယ်ယူသူများသည်ချဉ်းကပ်မှုအသစ်များကိုအလျင်အမြန်လိုက်နာကျင့်သုံးသောနေရာတွင်၊ အထူးသဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများရှိထုတ်လုပ်သည့်ကုန်ပစ္စည်းများအတွက်ပိုမိုမြန်ဆန်။ ပိုမိုထိရောက်သောစျေးဝယ်သည့်လမ်းကြောင်းကိုကျင့်သုံးနေကြသည်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick နိုဝင်ဘာလ 29, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 16, 2020 လက်ကားနှင့် B2B သုံးသပ်ချက်များ	မှတ်ချက် Leave
ရှည်လျားသောတနင်္ဂနွေမတိုင်မီနောက်ဆုံးအလုပ်တစ်ခုရရန်အမေရိကန်သန်းခေါင်စာရင်းဗျူရိုကယင်းကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည် လစဉ်ကြိုတင်စီးပွားရေးဆိုင်ရာညွန်းကိန်းများအစီရင်ခံစာ ကျေးဇူးတုံ့ပြန်မတိုင်မီနေ့၌အောက်တိုဘာလသည်။ ကြိုတင်လက်ကားရောင်းချမှုစာရင်းများသည်အောက်တိုဘာလတွင် ၀.၉% တိုးတက်ခဲ့သည်။ သြဂုတ်လမှစက်တင်ဘာလအထိအပြောင်းအလဲကို ၀.၄% မှ ၀.၇% သို့ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
နိုဝင်ဘာလ 24, 2020 နိုဝင်ဘာလ 24, 2020 Christina Kitova	မှတ်ချက် Leave
တူရကီသမ္မတ Recep Tayyip Erdogan ကတူရကီသည်ဥရောပ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်တူရကီသည်ဥရောပ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်ဟုပြောဆိုခြင်းသည်မဟာဗျူဟာမြောက်အပြောင်းအရွေ့တစ်ခုဖြစ်သည်။ သမ္မတအာဒိုဂန်သည်အော်တိုမန်အင်ပါယာကိုပြန်လည်တည်ထောင်လိုသောကြောင့်စွပ်စွဲခံခဲ့ရသည်။
ရောင်းချသူများကလက်လီ ၀ န်းကျင်သို့အပြောင်းအလဲများသိမ်းဆည်းရန်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြိုးစားကြသည်
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick နိုဝင်ဘာလ 21, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 16, 2020 လက်ကားနှင့် B2B သုံးသပ်ချက်များ	မှတ်ချက် Leave
ပြီးခဲ့သည့်လနှောင်းပိုင်းကအားကစားပစ္စည်းကိရိယာများကုမ္ပဏီ Under Armor မှကြေငြာခဲ့သည် လာမည့်နှစ်နှစ်အတွင်းလက်လီရောင်းဝယ်သူ ၂၀၀၀ နှင့်အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ခဲ့သည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့် Under Armor သည် ၄ ​​င်း၏တိုက်ရိုက်စားသုံးသူစီးပွားရေးကိုတည်ဆောက်ရန်အာရုံစိုက်လိမ့်မည်။ Promo Marketing သည်တတိယသုံးလပတ်အတွင်း Under Armour ၏ e-commerce စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင် ၅၀% ကျော်တိုးတက်မှုရှိကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့ပြီးတိုက်ရိုက်ဝယ်ယူသူများ၏ရောင်းအားမှာ ၁၇% တိုးတက်ခဲ့သည်။
အာဒိုဂန်သည်ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်“ နှစ်နိုင်ငံဖြေရှင်းမှု” ကိုတောင်းဆိုလိုက်သည်
နိုဝင်ဘာလ 18, 2020 နိုဝင်ဘာလ 18, 2020 Christina Kitova	မှတ်ချက် Leave
Nagorno-Karabakh ပconflictိပက္ခသည်ယခုအချိန်အထိအေးခဲသွားခဲ့သည်။ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးသဘောတူညီချက်ကိုလွန်ခဲ့သည့်အပတ်ကရုရှား၊ အာမေးနီးယားနှင့်အဇာဘိုင်ဂျန်အကြားလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည် ၀ န်ကြီးချုပ် Nikol Pashinyan ၏မအောင်မြင်သောခေါင်းဆောင်မှုကြောင့်အာမေးနီးယားအတွက်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်, ရုရှားငြိမ်းချမ်းရေးတပ်ဖွဲ့များဒေသတွင်းသို့ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။
Coronavirus - နေတန်ယာဟုသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာညီလာခံသို့တက်ရောက်သည်
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick နိုဝင်ဘာလ 11, 2020 နိုဝင်ဘာလ 11, 2020 David Wexelman	မှတ်ချက် Leave
အစ္စရေး ၀ န်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟုက COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများနှင့်ရောဂါကူးစက်မှုကိုအဆုံးသတ်ရန်အခြားနည်းလမ်းများကိုဆွေးနွေးခဲ့သည် ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်မှာ။ ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ကိုသြစတြီးယား၏အဓိပတိကတည်ခင်း, ည့်ခံခဲ့သည်။ အတူ Sebastian Kurz နော်ဝေး၊ ဒိန်းမတ်၊ ဂရိနှင့်ချက်သမ္မတနိုင်ငံ ၀ န်ကြီးချုပ်များပါ ၀ င်သည်။
လက်ကား PPE ဈေးကွက်ရှိသတင်းများ
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick နိုဝင်ဘာလ 8, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 16, 2020 လက်ကားနှင့် B2B သုံးသပ်ချက်များ	1 မှတ်ချက်
လိုအပ်မှုသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏မိခင်ဖြစ်သည်။ Coronavirus ကူးစက်ရောဂါကြောင့်လိုအပ်သော Great Lockdown သည်စီးပွားရေးကဏ္ many များစွာအားအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခြင်း၊ စီးပွားရေးပိတ်ပစ်ခြင်းနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးပြိုလဲခြင်းတို့ကိုဖြစ်စေခဲ့သည်။ သို့ရာတွင်စီးပွားရေးကျဆင်းမှုများကဲ့သို့ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသည့်အတိုင်းသတင်းဆိုးများအားလုံးမဟုတ်ပါ။
Coronavirus - ခရီးသွားများကိုတရုတ်ကန့်သတ်သည်
နိုဝင်ဘာလ 5, 2020 နိုဝင်ဘာလ 5, 2020 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
ကြာသပတေးနေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် တိုင်းပြည်ဝင်ခွင့်အပေါ်ကန့်သတ်အသစ် အများအပြားဥရောပနိုင်ငံများမှခရီးသွားများအားဖြင့် ယင်းကြောင့် coronavirus ကူးစက်မှု၏ဒုတိယလှိုင်း။ နိုင်ငံအတော်များများသည်သူတို့၏အမြင့်ဆုံးရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုတွေ့မြင်ခဲ့ တစ်ခုလုံး၏ Covid-19 စတင်ခဲ့သည့်ကူးစက်ရောဂါ ဝူဟန်တရုတ်နိုင်ငံမှာ ဟူဘေး အောက်တိုဘာလ 2019 ခုနှစ်, ပြည်နယ်။
ဗီယင်နာတိုက်ခိုက်မှုပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး Francis ကအကြမ်းဖက်မှုအဆုံးသတ်ရန်တောင်းဆိုလိုက်သည်
နိုဝင်ဘာလ 4, 2020 နိုဝင်ဘာလ 4, 2020 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
လူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းမှတစ်ဆင့် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဖရန့်စစ်ကသူ၏“ နာကျင်မှုနှင့်စိတ်ပျက်အားလျော့မှု” ကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည် ဘဝငါးခုဆုံးရှုံးခဲ့ရသောဗီယင်နာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုအပေါ်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကိုအတူတကွတည်ဆောက်ရန်နှင့်မုန်းတီးမှုမရှိဘဲနေထိုင်ရန်အကြမ်းဖက်မှုအားအဆုံးသတ်ရန်သူကတောင်းဆိုခဲ့သည်။ တိုက်ခိုက်မှု၏သံသယရှိသူတစ် ဦး, အသက် 20 နှစ်လူငယ်တစ် ဦး, ရဲကပစ်သတ်ခံခဲ့ရသည်။
တူရကီမြေငလျင်လှုပ်ခြင်း - ကလေးငယ်သည်အကျိုးအပဲ့မှကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခဲ့သည်
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick နိုဝင်ဘာလ 3, 2020 နိုဝင်ဘာလ 3, 2020 Juliet Norah	မှတ်ချက် Leave
၃ နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တစ် ဦး သည်ပြင်းအားပြင်းထန်သောငလျင်လှုပ်ခတ်ပြီးနောက်အပျက်အယွင်းမှအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့သည် ကြက်ဆင် သောကြာနေ့မှာ။ တနင်္ဂနွေနေ့မနက်နှင့်အလောင်းများထပ်မံရှာဖွေတွေ့ရှိသဖြင့်သေဆုံးသူ ၉၁ ဦး အထိမြင့်တက်ခဲ့သည်။ ကလေး, Elif Perincek၆၅ နာရီပတ်လုံးအပျက်အစီးများအောက်မှာနေခဲ့ရသည်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick အောက်တိုဘာလ 30, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 16, 2020 လက်ကားနှင့် B2B သုံးသပ်ချက်များ	မှတ်ချက် Leave
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ, ယူအက်စ်သန်းခေါင်စာရင်းဗျူရိုကပဏာမအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ခဲ့သည် စက်တင်ဘာလအတွက်လက္ကားစာရင်းနှင့်ပတ်သက်သောဒေတာ။ ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်လက်ကားအရောင်းအဝယ်သည်စက်တင်ဘာလတွင် ၀.၁ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းသွားသည်။ ၎င်းကိုသြဂုတ်လတွင် ၀.၃% တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ၄ င်းကိုယ်တိုင်ကို ၀.၄% မှပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
အောက်တိုဘာလ 27, 2020 အောက်တိုဘာလ 27, 2020 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
တူရကီသမ္မတ Recep Tayyip Erdogan ကသူ၏နိုင်ငံသားများကိုတနင်္လာနေ့ကတောင်းပန်ခဲ့သည် ပြင်သစ်မှကုန်ပစ္စည်းများမဝယ်ရန်။ သူ၏မှတ်ချက်များသည်အစွန်းရောက်မွတ်စလင်လူငယ်တစ် ဦး က၎င်း၏ဆရာတစ် ဦး အားခေါင်းဖြတ်သတ်လိုက်ပြီးနောက်အစ္စလာမ်အုပ်စုများအပေါ်ပြင်သစ်ကခိုင်မာစွာရပ်တည်ထားသည့်အပေါ်လက်တုံ့ပြန်ခြင်းဖြစ်သည်။
အမေရိကန်သည်အဇာဘိုင်ဂျန်နှင့်အာမေးနီးယားကို Karabakh တွင်တိုက်ပွဲများရပ်တန့်ရန်ဖိအားပေးသည်
အောက်တိုဘာလ 24, 2020 အောက်တိုဘာလ 24, 2020 Doris Mkwaya	မှတ်ချက် Leave
သူ၏အဇာရီနှင့်အာမေးနီးယားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်သီးခြားတွေ့ဆုံမှုများတွင် အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mike Pompeo ကစစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးအတွက်တောင်းဆိုလိုက်သည် Nagorno-Karabakh ၌တည်၏။ အဇာဘိုင်ဂျန်ကအာမေးနီးယားက Nagorno-Karabakh ကိုသိမ်းပိုက်ပြီးနောက်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုများပြန်လည်စတင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick အောက်တိုဘာလ 23, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 16, 2020 လက်ကားနှင့် B2B သုံးသပ်ချက်များ	မှတ်ချက် Leave
အဆိုပါ Associated Press ကြောင်းပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကအစီရင်ခံခဲ့သည် စက်တင်ဘာလတွင်အမေရိကန်၏လက်ကားဈေးနှုန်းသည် ၀.၄% အထိတက်ခဲ့သည်သုံးလလမ်းကြောင်းသစ်ကိုဆက်လက်။ ဒါကမတူတာပါ ရိုက်တာသတင်းဌာနကသတင်းပို့သည်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကလည်းဂျပန်လက္ကားဈေးနှုန်းမှာ ၀.၈% ကျဆင်းခဲ့သည်။
အီးယူ Erdogan ကိုတိုက်ခိုက်ရန်ခွင့်ပြုပါသလား။
အောက်တိုဘာလ 21, 2020 အောက်တိုဘာလ 21, 2020 Christina Kitova	မှတ်ချက် Leave
ဥရောပသမဂ္ဂသည်တူရကီအပေါ်ပိတ်ဆို့မှုများကိုတနင်္ဂနွေနေ့တွင်ဆွေးနွေးခဲ့သော်လည်း (သဘောမတူခဲ့ပါ) Euronews ကတင်ပြခဲ့သည်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမြေထဲရှိဂရိနှင့်ဆိုက်ပရပ်စ်လူမျိုးတို့၏အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်အခွင့်အရေးများကိုချိုးဖောက်သောကြောင့်နိုင်ငံများစွာကတူရကီကိုအပြစ်ပေးချင်ကြသည်။ သို့သော်ဂျာမနီ၊ စပိန်၊ အီတလီ၊ ဟန်ဂေရီနှင့်မော်လတာနိုင်ငံတို့သည်အဆိုပြုလွှာကိုပိတ်ပင်ထားသည်။
ဂျပန်၏လက်ကားရောင်းဝယ်ရေးစျေးကွက်ကျဆင်းခြင်း - Horizon ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖြေရှင်းနည်းလော။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick အောက်တိုဘာလ 16, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 16, 2020 လက်ကားနှင့် B2B သုံးသပ်ချက်များ	မှတ်ချက် Leave
ယခုအပတ်အစောပိုင်းကရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့သည် စက်တင်ဘာလတွင်ဂျပန်လက်ကားဈေးနှုန်းသည် ၀.၈% ကျဆင်းခဲ့သည်တစ်နှစ် -on- တစ်နှစ်ကျဆင်းမှု၏သတ္တမမြောက်ဆက်တိုက်လအထိမ်းအမှတ်။ သြဂုတ်လနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်စျေးနှုန်းများသည် ၀.၂ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့သည်။ ၄ လအတွင်းဂျပန်တွင်ပထမလတွင်ကျဆင်းခဲ့သည်။ ၎င်းတို့၏အချက်အလက်များသည်ဂျပန်ဘဏ်၏ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာ့တန်ဖိုးကွင်းဆက်များကို အသုံးပြု၍ အိန္ဒိယ၏အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအရှိန်မြှင့်နိုင်မည်လား။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick အောက်တိုဘာလ 11, 2020 အောက်တိုဘာလ 10, 2020 လက်ကားနှင့် B2B သုံးသပ်ချက်များ	မှတ်ချက် Leave
ပြီးခဲ့သည့်သုံးလပတ်အတွင်းအိန္ဒိယ၏ဂျီဒီပီသည် ၂၄% အထိကျဆင်းသွားပြီးကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးကျဆင်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤသိသိသာသာကျဆင်းမှု၏အဓိကအကြောင်းရင်းမှာအိန္ဒိယသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင် COVID 24 စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုများအနက်တစ်ခုအပါအ ၀ င်ဖြစ်သည်။
၎င်းသည်သန်းနှင့်ချီသောအင်ဒီးယန်းများ၏အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းမှုကိုများစွာထိခိုက်စေခဲ့သည်။ ဒီတော့အင်ဒီးယန်းတွေဟာသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးကိုပြန်လည်ကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဖို့နဲ့သန်းချီတဲ့နိုင်ငံသားတွေအတွက် ၀ င်ငွေဆုံးရှုံးမှုကိုတိုးမြှင့်ဖို့ဘာလုပ်နိုင်သလဲ။ လေ့လာမှုတစ်ခုရှိပါတယ် ပြသ နိုင်ငံအားလုံးနီးပါးသည် Global Value Chain (GVC) အသစ်တည်ထောင်ရန်နှင့်တည်ထောင်ရန်လိုအပ်သည်။ ၀ င်ငွေတိုးမြင့်ရန်နှင့်ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျှော့ချရန်အတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောသက်သေပြနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick အောက်တိုဘာလ 9, 2020 အောက်တိုဘာလ 9, 2020 လက်ကားနှင့် B2B သုံးသပ်ချက်များ	မှတ်ချက် Leave
Coronavirus ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုနှင့် Great Lockdown ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောစီးပွားရေးကျဆင်းမှုများကြောင့်ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးအနှံ့အပြားရှိစက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်ကဏ္sectorsများစွာသည်အကြီးအကျယ်ခံစားခဲ့ရသည်။ အချို့သောကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက် ၀ ယ်လိုအားသည်ပြိုလဲသွားသည်။ အခြားနေရာများတွင်မူလက်လီရောင်းချသူများနှင့်စားသုံးသူများသို့ဖြန့်ဖြူးရန်နည်းလမ်းများပြတ်တောက်သွားသည်သို့မဟုတ်အကြီးအကျယ်ပျက်ပြားသွားသည်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick အောက်တိုဘာလ 6, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 16, 2020 လက်ကားနှင့် B2B သုံးသပ်ချက်များ	မှတ်ချက် Leave
အင်ဒိုနီးရှားသည်လူ ဦး ရေ (လူ ဦး ရေ ၂၆၇ သန်း) နှင့်အရှေ့တောင်အာရှတွင်အကြီးဆုံးစီးပွားရေးဖြစ်ပြီးဂျီဒီပီဒေါ်လာ ၁.၁၂ ထရီလီယံရှိသည်။
ဤကျွန်းစု၏အနာဂတ်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုသည်နောက်နှစ်အနည်းငယ်တွင်လူ ဦး ရေပျမ်းမျှအသက် ၃၀.၅ နှစ်အရွယ်တွင်နေထိုင်သူလူ ဦး ရေပြောင်းလဲမှုနှင့်ကိုက်ညီနိုင်ပါသလား။ လေ့လာရေး ပြသကြ ၀ င်ငွေတိုးလာခြင်းနှင့်ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျှော့ချခြင်းတို့ကိုသက်သေပြနိုင်ခဲ့သည့်အတွက်အင်ဒိုနီးရှားကသူတို့၏ကမ္ဘာ့တန်ဖိုးကွင်းဆက်ကိုချဲ့ထွင်ရန်လိုအပ်သည်။
Pandemic Economy ရှိလက်ကားရောင်းသူများအတွက်အသစ်အဖြေတစ်ခု
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick အောက်တိုဘာလ 4, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 16, 2020 လက်ကားနှင့် B2B သုံးသပ်ချက်များ	မှတ်ချက် Leave
Coronavirus ကူးစက်ရောဂါနှင့်ဆက်စပ်သော Great Lockdown သည် ၂၀၂၀ တစ်လျှောက်လုံးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးကိုအကြီးအကျယ်ပျက်စီးစေခဲ့သည်။ ခန့်မှန်းချက်များအရဒီအားကောင်းတဲ့စျေးကွက်ဟာယခုနှစ်ကာလအတွင်းစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးရဲ့ကျဆင်းမှုကိုကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick စက်တင်ဘာလ 27, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 16, 2020 လက်ကားနှင့် B2B သုံးသပ်ချက်များ	မှတ်ချက် Leave
ကမ္ဘာလုံးဆိုင် လျင်မြန်စွာတိုးတက်နေသောအွန်လိုင်းလက္ကားရွေးချယ်မှုဖြစ်ပြီးသင်သည်သင်ဝယ်သူသို့မဟုတ်ရောင်းသူဖြစ်ပါကထုတ်ကုန်အတွက်ဤထူးခြားသောရွေးချယ်မှုများကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဤသည်အမှန်တကယ်ပိုကောင်းတဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလက္ကားပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင် Vanuatu, Australia, Thailand နှင့်အမေရိကရှိများစွာသောသူများ၏အကျိုးစီးပွားများနှင့်အတူအမှန်တကယ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်ထူးခြားသောရွေးချယ်စရာများကိုထောက်ပံ့ပေးပြီးဖြစ်သည်။
RangeMe - ဆက်သွယ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းလား။ သို့မဟုတ်ဝယ်သူသတိပြု?
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick စက်တင်ဘာလ 25, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 16, 2020 ဂျေးက Black	မှတ်ချက် Leave
RangeMe သည် ၀ န်ဆောင်မှုကိုလက်ကားရောင်းသူများနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်အထူးပြုသော ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၀ န်ဆောင်မှုများကို ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးကိုရှုထောင့် ၂ မျိုးဖြင့်ပေးသည်။ ဝယ်သူများအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊
၀ ယ်သူများသည်အကောင့်များကိုအခမဲ့ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကုန်ပစ္စည်းများကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုရန်နှင့်သင်နှင့်ယခင်ကမဆက်ဆံခဲ့ဖူးသောပံ့ပိုးသူအသစ်များနှင့်ဆက်သွယ်မှုများကိုရှာဖွေရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သို့သော်လုပ်ငန်း၏လက်ကားရောင်းဘက်သည်အနည်းငယ်မှောင်မိုက်နေသည်။
Moria - ဂရိတွင်သင်္ဘောပေါ်တွင်အိမ်ပြောင်းရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရန်
ဂရိနိုင်ငံ ကျွန်းရှိအိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးလာသူများကိုကူညီရန် Lesbos သို့သင်္ဘော ၃ စီးပို့ရန်စီစဉ်ထားသည်။ သီတင်းပတ်အစောပိုင်းကအကြီးဆုံးရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည်စခန်းမီးလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့်ထောင်နှင့်ချီသောရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများကိုချမ်းအေးစွာအိပ်စက်အနားယူစေပြီးနောက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား ၂၀၀၀ ခန့်ကိုသင်္ဘောများတွင်ထားရှိမည်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုန်ထုတ်လုပ်မှုစတိုး - သင်၏ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းကိုလိုအပ်ပါသလား။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick စက်တင်ဘာလ 11, 2020 စက်တင်ဘာလ 10, 2020 လက်ကားနှင့် B2B သုံးသပ်ချက်များ	မှတ်ချက် Leave
ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးလိုအပ်ချက်များအတွက်အင်တာနက်သို့ကြီးမားစွာရွှေ့ပြောင်းခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မြင်နေရပြီ။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးစီးပွားရေးပြောင်းရွှေ့မှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သော်လည်းအသေးစားကုန်ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီအများအပြားသည်သူတို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များကိုနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမွမ်းမံနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘဲပိုမိုထိရောက်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးချဲ့ရန်နှင့်မြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည်။
ယခုအခါသေးငယ်သောထုတ်လုပ်မှုသည်ကမ္ဘာ့စျေးကွက်သို့ ၀ င်ရောက်ရန်အချိန်တန်ပြီလား။
Moria, ဥရောပ၏အကြီးမားဆုံးဒုက္ခသည်စခန်း, ဖျက်ဆီး
စက်တင်ဘာလ 10, 2020 စက်တင်ဘာလ 10, 2020 ဘင်နီဒစ် Kasigara	မှတ်ချက် Leave
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ရဲ့အစောပိုင်းအချိန်တွေမှာ Moria ဒုက္ခသည်စခန်းအတော်များများတွင်မီးလောင်ခဲ့သည် ဂရိနိုင်ငံ Lesbos ကျွန်းပေါ်တွင်ရှိသည်။ လေသည်မီးကိုလောင်သောကြောင့်၎င်း၊ တပ်ပတ်လည်၌၎င်း၊ မီးသတ်သမား (၂၈) ဦး သည်မီးသတ်ရှစ်ခုပါသောမီးကိုထိန်းချုပ်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ ယခုမီးကိုထိန်းချုပ်နေပြီ။